Abakhiqizi nabahlinzeki abangama-1000M abanga-PoE - China 1000M non-PoE Factory
I-ES1208 iyi-8-port 10/100 / 1000mbps switch engalawulwa ye-Ethernet isebenzisa i-Realtek RTL8370N chipset. I-ES1208 iqinisekisa ukwabiwa komkhawulokudonsa osebenzayo echwebeni ngalinye ngemodi yokudlulisela phambili nokudlulisa nokunikezwa kwememori okunamandla. Inikezela ngamachweba ayisishiyagalombili we-10/100 / 1000Mbps ahambelana nezindawo zenethiwekhi ze-10base-T, 100base-TX kanye ne-1000Base-T, ukuxoxisana okuzenzakalelayo ngejubane letheku 10/100 / 1000Mbps. Izinkomba ze-LED zingabonisa amandla nenethiwekhi ukuxhuma / ukunqamula ngamandla. I-ES1208 incane li ...
I-ES1210P Gigabits Shintsha Okungalawulwa
I-ES1210P switch ishintshi engalawulwa ngokuphelele ye-DCN, enikezela ngamachweba ayisishiyagalombili we-10/100 / 1000Mbps namachweba amabili we-100 / 1000Mbps SFP, wonke asekela ukudluliselwa kwejubane. Izinkomba ze-LED zingabonisa amandla nenethiwekhi ukuxhuma / ukunqamula ngamandla. I-ES1210P inokuklanywa kokuhlanganiswa okuphezulu, isisindo esincane nokusebenza okulula, okulungele ihhovisi elincane neliphakathi nendawo nenethiwekhi yokufinyelela kwezokuphepha. Izici Zokuvumelana nge-IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az ...
I-ES1226P Gigabits Shintsha Okungalawulwa
I-ES1226P iyinkinobho yokufinyelela engalawulwa ngokuphelele ye-DCN, enikezela ngamachweba angama-24 10/100 / 1000Mbps auto-negotiation RJ45 kanye namachweba amabili we-1000mbps SFP. Akukho ukucushwa okudingekayo lapho kusatshalaliswa idivayisi, futhi ukudluliswa ngejubane kwentambo kwawo wonke amachweba kungabonakala ngemuva kokuxhunywa kwamandla, okungahlangabezana nezimo ezahlukahlukene zokufinyelela ze-Ethernet. I-ES1226P iyithuluzi elithandwayo lamabhizinisi, amakhefi e-Intanethi, izindawo zokuhlala kanye namanethiwekhi ekampasi ukwakha ukufinyelela kwe-gigabit. Izici Ngokuvumelana ne-IEEE802.3, IEE ...
I-ES1224 Gigabits Shintsha Okungalawulwa
I-ES1224 switch ishintshi engalawulwa ye-DCN's full-gigabits, ehlinzeka ngamachweba angamashumi amabili nane we-10/100 / 1000Mbps, wonke asekela ukudluliselwa kwejubane. I-ES1224 iqinisekisa ukwabiwa kahle komkhawulokudonsa echwebeni ngalinye ngemodi yokudlulisela phambili nokudlulisa nokunikezwa kwememori okunamandla. Iphinde isekele ukugeleza kokugeleza okungagwema ngempumelelo ukulahleka kwepakethe ekudlulisweni nasekwamukelweni. I-Energy Efficient Ethernet standard IEEE802.3az ku-ES1224 iyenza ikwazi ukunciphisa ngempumelelo ukusetshenziswa kwamandla kanye ...
I-ES1216 switch ishintshi engalawulwa ye-DCN's full-gigabits, enikezela ngamachweba ayishumi nesithupha we-10/100 / 1000Mbps, wonke asekela ukudluliselwa kwejubane. I-ES1216 iqinisekisa ukwabiwa kahle komkhawulokudonsa echwebeni ngalinye ngemodi yokudlulisela phambili nokudlulisa nokunikezwa kwememori okunamandla. Iphinde isekele ukugeleza kokugeleza okungagwema ngempumelelo ukulahleka kwepakethe ekudlulisweni nasekwamukelweni. Amandla asebenza kahle e-Ethernet standard IEEE802.3az ku-ES1216 enza ukuthi ikwazi ukunciphisa ngempumelelo ukusetshenziswa kwamandla ne-prot ...